Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Ọrụ -> Mgbakwunye
 Ka onye ọ bụla nꞌetiti unu ghọta ma kpebie nꞌobi ya na ihe ọ na-eme ziri ezi. Mgbe ahụ ọ ga-enwe afọ ojuju nꞌime onwe ya na ọrụ ya bụ ezi ọrụ. Ọ gaghị adịkwa mkpa na ọ ga-eji onwe ya tụnyere onye ọzọ. Anyị nile nꞌotu nꞌotu kwesịrị ibu ibu ịta ụta dịrị anyị.
2 TIMỌTI 2:6
Na-arụsikwa ọrụ gị ike dị ka onye ọrụ ubi nke na-enweta ego hiri nne, ma ọ bụrụ na ọ kụọ mkpụrụ hiri nne.
 Nꞌebe a ka gị onwe gị ga-abụrụ ha ihe ịma atụ na ihe ilere anya nꞌịrụ ọrụ ọma. Mee ka ihe nile ị na-eme gosi na ị hụrụ eziokwu ahụ nꞌanya, na ị bụkwa onye na-adịghị eji ya egwuri egwu. Hụ na mkparịta ụka gị nile bụ site nꞌuche zuru oke, nke guzokwa ọtọ. Nke a ga-eme ka onye ọ bụla bịakwutere gị ka gị na ya rụrịtaa ụka laa nꞌihere, nꞌihi enweghị ihe ọ bụla o jidere aka ọ ga-eji kwujọọ gị.